Indawo ephangaleleyo kunye neyanamhlanje ineebhedi ezi-4 ezineebhedi ezi-4 kunye neebhedi ezi-2 ezongezelelweyo. Amagumbi okulala ahlulwe kwindawo yokuhlala. IP TV, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo elinefriji, umoya womoya, izixhobo zabucala (igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nendlu yangasese), iterrace yebalcony enezihlalo.
Idolophana yasePodhájska ikwincam esemazantsi yePohronská pahorkatina kwindawo yokuphakama kweemitha ezili-170 ngaphezu komphakamo wolwandle. Owona mtsalane mkhulu yiPodhájska Thermal Swimming Pool, ekumazantsi eSlovakia kufutshane neNové Zámky, inika abatyeleli ithuba lokuphumla kunye nokuzonwabisa ehlotyeni nasebusika.
Iindwendwe kwi-swimming pool azikho kuphela iSlovaks, kodwa nabakhenkethi abavela eCzech Republic, ePoland, eHungary, e-Austria nakwamanye amazwe. Ngexesha lasehlotyeni kukho amadama okuqubha alithoba kunye nesilayidi samanzi. Iqula lokuqubha elishushu likwabandakanya iZiko le-Aquamarin Wellness elisandula ukudalwa.
Iziko le-Aquamarin Wellness libonelela ngendawo efanelekileyo yokuphumla kunye nokuthuthuzela. Igama leziko le-adventure Wellness lithathwe kwi-aquamarine yamatye anqabileyo (lat. Aqua marina = amanzi olwandle). Iindwendwe zinokusebenzisa umhlaba wephuli yangaphakathi nangaphandle, umhlaba obalulekileyo, iHammam yokuhlambela yaseTurkey, ibha yamanzi, indawo yokuphumla, igadi yezityalo kunye nekhefi.
Ihlabathi le-swimming pool-libonelela ngamachibi ali-9 ngamanzi ashushu kunye nenkonzo, amanzi amaninzi anomtsalane kwindawo yangaphakathi nangaphandle.
I-Vital World - inikezela ngeenkonzo eziyinkimbinkimbi zokuphumla - i-saunas, itonela yetropiki, isihogo samanzi, ukuhlamba elwandle, i-tepidarium, i-icefall, ibhakethi yesibindi kunye nedama lokupholisa.
Ukuhamba ngeenyawo kunye nokuhamba ngebhayisikile malunga nePodhajska nako kuyenzeka.